Mampaharitra Mandrakizay Ny Tantarany: Ny Lova Navelan’i Bassel Khartabil · Global Voices teny Malagasy
Mampaharitra Mandrakizay Ny Tantarany: Ny Lova Navelan'i Bassel Khartabil
Voadika ny 21 Septambra 2017 5:34 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Ελληνικά, Français, Português, Italiano, عربي, English
Bassel Khartabil (Safadi). Sary avy amin'i Joi Ito (CC BY 2.0)
Iray volana mahery taorian'ny fanamafisana ny namonoana azy, manohy manome voninahitra ho fahatsiarovana an'ilay developera Syriana, Bassel Khartabil Safadi sy manome voninahitra ny lova navelany ireo mpanohana azy.
Nandray anjara toerana lehibe tamin'ny fanitarana ny fidirana amin'ny aterineto sy ny fahalalana misokatra ho an'ny vahoaka ao Syria i Bassel, mpitarika amin'ny teknolojia misokatra ao Syria izy izay navitrika tamin'ny tetikasa, toy ny Creative Commons sy Wikipedia. Nogadrain'ny fitondran'i Assad tamin'ny 15 martsa 2012 izy ary nanjavona tao amin'ny efitra nisy azy tao am-ponja tamin'ny Oktobra 2015. Tamin'ny 31 Jolay 2017, nahafantatra ny fianakaviany fa novonoin'ny [mg] governemanta Syriana izy fotoana fohy taorian'ny fanjavonany.
Nanomboka teo, nahita fomba marobe hanomezam-boninahitra ny fiainany sy manohy manohana ireo karazana asa tena nanome aingam-panahy azy indrindra sy ireo soatoavina izay nijoroany ireo namana, mpiara-miasa aminy sy ireo mpankafy an'i Bassel.
Notsarovana tao amin'ny Syrian New Waves, fandaharana sarimihetsika Siriana, zavakanto an-tsary, mozika sy resadresaka natao tao amin'ny Tranombakoka Eye Film tao Amsterdam ny 8-10-Septambra i Bassel.
Tamin'ny kabary fanokafana nataon'i Donatella Della Ratta, mpandrindra ny hetsika, mpanoratra sady manam-pahaizana izay namana akaiky an'i Bassel, nanoritsoritra ny fomba nanentanan'i Bassel ireo tanora Syriana maro mba haka sary izay zava-mitranga ao amin'ny firenena izy:
Nihaona taminy tao ambadiky ny ordinatera tany Damaskosy aho taona maromaro lasa izay. Izy no injeniera solosaina marani-tsaina indrindra fantatro hatramin'izay. Ankafizin'ny olon-drehetra izy ary nirian'ny orinasa maromaro tao amin'ny Silicon Valley.
Raha nanomboka tany Syria tamin'ny taona 2011 ny fitroarana, dia teo aho, nahita azy niova tsy ho mpankafy tafahoatra ny ordinatera nahafantarana azy taloha aho fa lasa nanoka-tena tanteraka ho an'ny olom-pirenena ao amin'ny firenena izay niezaka hitondra fiovana lehibe. Noraisiny ny finday fakan-tsarimihetsika ary nanomboka naka sary izy, ka lasa iray amin'ireo olona maka sary tsy mba sasatra izy, ary mamoaka izany sy mizara satria tian'izy ireo hahita ny zava-mitranga any amin'ny firenena iray izay sahy mangataka fahalalahana sy fahamendrehana bebe kokoa izy ireo: filàna tena fototra.
Tahaka an'i Bassel, tanora Syriana marobe no nandray finday fa tsy fitaovam-piadiana mba hiady amin'ny fitondrana izay nandray azy ireo ho toy ny hoe nitondra fitaovam-piadiana sy fahavalon'ny firenena.
Tia ny fireneny i Bassel ary novonoin'ny fitondrana izay niantso azy ho mpamadika noho izy nampiseho an'izao tontolo izao fa raha ny tena marina, nisy zavatra iray tokoa antsoina hoe revolisiona milamina tao Syria. Naniry i Bassel mba tsy hamela sy tsy hanadino an'i Syria izao tontolo izao. Naniry porofo velona momba ny habibiana nataon'ny fitondrana i Bassel ary nanao sary. Maty izy noho ny famokarana porofo an-tsary, raha mbola velona kosa ny fitondrana ary miramirana sy miezaka manaisotra ireo sary rehetra ireo sy ireo mpamorona azy …
Mankalaza ny asan'ireo mpamokatra sarimihetsika sy mpanakanto an-tsary vaovao marobe “izay mametraka ny sarin'i Syria ankehitriny amin'ny fomba fijery lavitra kokoa fa tsy mijery azy toy ny porofo hitamaso tsotra avy amin'ny firenena ravan'ny ady” ny fandaharana.
Nanambara ny Vatsim-pianarana “Bassel Khartabil Free Culture Fellowship” ireo fikambanana tsy miankina marobe toy ny Wikimedia Foundation, Mozilla sy Creative Commons mba ho fanomezam-boninahitra ny fandraisan'i Bassel anjara tamin'ny kolontsaina malalaka sy ny tranokala misokatra. Ny vatsim-pianarana dia “hanohana ireo olona miavaka amin'ny fampandrosoana ny kolontsain'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo ao anatin'ny toe-java-tsarotra” ary andrisihana mafy ny faritr'i Levant ao Afovoany-Atsinanana mba hametraka fangatahana. Mpiara-miasa akaiky amin'ny vatsim-pianarana ny Global Voices.
Nanangana ny Tahirim-bola Fahatsiarovana An'i Bassel Khartabil ihany koa ny Creative Commons ho fanohanana ireo “tetikasa, fandaharan'asa sy fanampiana ara-bola ho an'ny olona mampandroso ny fiarahamiasa, ny fampandrosoana ny fiarahamonina sy ny fampandrosoana ny fitarihana ao amin'ireo vondrom-piarahamonina misokatra ao amin'ny tontolo Arabo”.
Bassel Khartabil was truly an unCommon ally. Thank you #wikimania. Support the Bassel Khartabil Memorial Fund at https://t.co/hfAVpnicBlpic.twitter.com/IJvas5NYcA
Tena mpiara-dia [Tsy-mahazatra= unCommon] marina i Bassel Khartabil. Misaotra #wikimania. Tohano ny Tahirim-bola Fahatsiarovana an'i Bassel Khartabil ao amin'ny https://t.co/hfAVpnicBl pic.twitter.com/IJvas5NYcA
Nisy ihany koa ny endrika hira ho fanomezam-boninahitra an'i Bassel. Tamin'ny 5 Septambra, namoaka ny “A Future In Commons: A Tribute To Bassel Khartabil,” fanakambanana hira nosoratana nandritra ny taona maro ary ahitana ny tenin'i Bassel, ny taratasiny ary koa ny feony manokana mihitsy ny Disquiet Junto, vondrona mpihira misokatra.
Nofaritan'ny vondrona toy ny ezaka “fandraisana ara-keviny ny feo avy amin'ny hakanton-teny amin'ny taratasiny” ny rakikira ary mba “hampaharitra ny tantarany na dia efa tsy eo intsony aza izy.” Ireto hira roa notsongainay tamin'ny rakikira:
7 andro izayAlzeria